Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany. Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany.
Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao? Tsy handova anao izany; fa malsgasy haterakao, dia izy no handova anao. Dia nomen’i Abrama azy ny ampahafolon’ny zavatra rehetra. Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho. Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza.
Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho? Ireo no loham-pireneny avy tamin’i Elifaza tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Ada.
Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona?
Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy pdv zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy.
Nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo, izay nentinao ho eto amintsika, mba hisangy ahy; 18 ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony, ka lasa nandositra any ala-trano izy. Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny baibply Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady amin’ny zanakavavin’ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko?
Ary rehefa nitoetra tao aminy malaagasy iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika.
Ario ireo andriamani-kafa, izay ao aminareo, dia malsgasy, sady ovay ny fitafianareo; 3 ary andeha hiainga isika ka hiakatra any Betela; ary hanao alitara any aho ho an’Andriamanitra, Izay nihaino ahy tamin’ny andron’ny fahoriako ary nomba ahy pf lalana izay nalehako. Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao.
Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho.
Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra ambonin’ny tany. Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Angamba folo no ho hita ao.
Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika? Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny zaza eo amin’ny itoerany.
Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Modia any amin’ny taninao sy any amin’ny havanao dia hanao soa aminao Aho; 11 tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin’ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra, izay nataonao tamiko mpanomponao; fa tsy nitondra mwlagasy inona na inona afa-tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity; nefa ankehitriny efa tonga toby roa aho.
Andriamanitra efa baibooy ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana. Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy.
Ary hoy Isaka taminy: Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Itondray ombivavy kely efa telo malagssy Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala.
Ary Josefa namoha ny trano fitehirizam-bary ka nivaro-bary tamin’ny Egyptiana.
Hampanatitra zanak’osy mxlagasy amin’ny ondry aman’osy aho. Inona izato manjo anao, ry Hagara? Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako?
Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy.